UNGALISHOVA NOMA USUKHULILE IBHAYISIKILI
UNKSZ Mano Sizakele Makhanya(54) waKwaMashu oshova ibhayisikili uthe kumsize kakhulu ukunyakazisa umzimba ngoba unezifo ezingamahlala khona. Isithombe: Sithunyelwe
Phili Mjoli | September 25, 2020
UNksz Nomaledi Dlungwane (55) osebenza eDurban University of Technology (DUT) noNksz Mano Sizakele Makhanya (54) owuthisha esikoleni iWelile Moshoeshoe eNanda, bakukhonzile ukushova amabhayisikili.
UNksz Dlungwane ukhule ethanda ezemidlalo kakhulukazi ukugijima.
“Njengamanje ngijima eBBB Gym eKwaMashu. Eminyakeni emibili edlule ngabona umncintiswano waMashovashova, ngawuthanda. Ngatshela umqeqeshi wami ukuthi ngingathanda ukuziqeqeshela wona ukuze umzimba wami ulolongeke kahle. Wangiyisa esikhungweni lapho okuqeqeshelwa ukushova amabhayisikili, ngafike ngathanda yize nganinovalo ngenxa yeminyaka yami,” kuchaza uNksz Dlungwane.
UNksz Makhanya uthe wangena kulo mdlalo ngoba efuna ukusiza ingane yakhe eshova amabhayisikili KwaMashu.
“Ingane yami isohlelweni lokushova amabhayisikili olwenziwa epaki iGo Durban Bic Park (eMakhehleni). Singomama, sabuza ukuthi singazeseka kanjani izingane zethu. Umqeqeshi wazo wathi angasifundisa nathi. Safunda kanjalo kodwa ngesikhathi sifunda sasingazi ukuthi kanti amabhayisikili ayabiza. Abanye omama bagcina beyekile ngenxa yokuthi ayabiza,” kusho uNksz Makhanya.
Uthe ukuzilolonga kumsiza ngokuthi akwazi ukulawula izifo ezingamahlala khona.
“Ibhayisikili liyefana nemoto lishintshwa amagiya okuyinto eyaqale yangixaka ngoba ngangizitshela ukuthi uyashova nje kuphela. Isisindo asinankinga kodwa kubhekwa ukuthi umude kangakanani. Akumele ugibele ibhayisikili elide noma elifishane kakhulu kunawe,” kuchaza yena.
Bobabili bathi sebeke babayingxenye yaMashovashova Race kusukela ngo-2018 kodwa basuke bengancintisani namuntu kepha basuke bezilolonga nje. Ngo-2018 bashova amakhilomitha angu-45 kwathi ngo-2019 bashova angu-65.
UNksz Dlungwane uthe abakabi nayo ikilabhu abangaphansi kwayo kodwa bayafisa ukuba nekilabhu KwaMashu ngoba sebebaningi abantu abathanda lo mdlalo.
“Sifuna ukukhipha umcabango wokuthi lo mdlalo ungawudlala uma uwuqale usemncane. Izalukazi zabelungu ezishovayo sasicabanga ukuthi zaqala zisencane, ngakho thina ngeke sikwazi. Ukuhuzuka kuyenzeka kodwa awulimali kakhulu kanti novalo luba khona uma ungena emgwaqweni ngoba izimoto zingakushayisa,” kusho uNksz Makhanya.